ActiveConversion: Chọpụta ma soro ndị ọbịa websaịtị | Martech Zone
Ntughari Active bụ ndu sọftụwia nke nta na azụmaahịa. Ahịa na ahịa ha na-enye ụlọ ọrụ ohere ịchọpụta ndị ọbịa nwere mmasị, ụlọ ọrụ na ndị tozuru etozu na-eleta saịtị gị. Enwere ike ịziga akụkọ banyere ndị ruru eru na-eduga ndị ahịa gị iji gwa ha banyere atụmanya ịntanetị kachasị arụ ọrụ.
Ntughari ActiveTeknụzụ nsuso nwere ike ikpebi ọrụ nnata email na azịza nye onyinye emelitere. Ihe ngwọta ahụ nwere ike ịnye nghọta n'ofe ọwa nke mkpọsa ahịa gị gụnyere azụmaahịa gị n'ịntanetị, bipụta mgbasa ozi, mgbasa ozi mgbasa ozi, na ndị ọbịa na-aga na weebụsaịtị ma ọ bụ ihu ọdịda.
Email ha na-akpaghị aka, ProspectAlert, na-enye echiche nke ire ahịa nke ozi ndu n'ime ActiveConversion. A na-enye ozi dị mkpa maka ndị na-ere ahịa ahịa gị na atụmanya e kenyere ha. Usoro ahụ na - ejikọta na Salesforce.com ma ọ bụ Microsoft Dynamics mana CRM adịghị mkpa - ndị otu ahịa gị nwere ike nbanye ozugbo iji hụ ozi niile anakọtara.
Tags: mbugharị mbugharịmata ndumata ndị ọbịaIhe omimi Microsoftndị ahịanjirimara ndị ọbịa